Mafirimu ekuona sevanhu vaviri: ndeapi akanakisa? | Ndipei zororo
Sravana Sameeralu Serial XNUMXth Hollywood Cinema
Mafirimu ekuona sevanhu vaviri
Gabriela moran | | Cine, Horror Cinema
Chimwe chezviitiko zvinonyaradza zvikuru kuita sevakaroora kutarisa mafirimu mukunyaradza kwesofa. Iwe unofanirwa kuita sarudzo inozo chengeta mose muri vaviri kufarira kudzivirira mumwe wenyu kubva pakubatwa nehope. Isu tinoziva kuoma kwazvingave kuita kugombedzera mumwe wedu kuti aone bhaisikopo ratiri kuda, kana zvinopesana. Muchikamu chino chose ini ndinopa kusarudzwa kwemavhidhiyo ekuona sevakaroora pasina munhu anofa neshungu.
Kune akawanda marudzi, asi kazhinji pane maviri anomutsa kufarira kubva kuvose varume nevakadzi: MaRoma comedies uye anotyisa mafirimu! Iko hakuna chinhu senge kukwikwidzwa kumusoro panguva yekufungidzira zvakanyanya mune inotyisa zano! Kune rimwe divi, comedies erudo inogadzira inonakidza, yakasununguka uye yekudanana mamiriro. Kusarudzwa kunosanganisira giredhi rakapihwa na IMDb
Unoda here ona mafirimu aya mahara? Edza Amazon Prime Vhidhiyo uye uchaona zvizhinji zvacho
1 Kupenga uye kupusa rudo
2 Warren Faira: Iyo Inobata
3 Nekodzero yekukwiza
5 Pasina kusungirwa
6 Insidious (Husiku hweDhimoni)
7 Shanda uchienderera mberi… Mafirimu ekuona sevanhu vaviri!
Kupenga uye kupusa rudo
Yerudo comedy yakaburitswa muna 2011 uye nyeredzi Emma Stone, Ryan Gosling, Julianne More, naSteve Carell. Iyo nyaya inotaurirwa nezvevaviri vari munzira dzekurambana dzakatangwa nereururo yekusatendeka nemukadzi wavo. Mushure mekunzwa mashoko anoparadza, Cal (Steve Carell) anosangana nemumwe mudiki anonyengera (Ryan Gosling) uyo anomubatsira kuti abude munzvimbo yake yekuora mwoyo uye agovana naye hunyengeri hwekunyengera.
Cal anodzokazve kuvimba kwake maari uye anotanga kukunda kwevakadzi: anosangana nevakadzi vazhinji mune akasetsa mamiriro, pakati payo mudzidzisi weumwe wevana vake anomira.
Zvichakadaro Jacob (Ryan Gosling) anosangana naHanna (Emma Stone) netsaona waanotora akananga kuimba yake seimwe yekukunda kwake kwakawanda. Pasina nguva, vanowira murudo uye vanoona chokwadi chinogumbura: Hanna mwanasikana waCal!
Zviripachena kuti Cal anopokana nehukama hwemwanasikana wake neCasanova uye otanga gakava rinoguma rawana manzwiro echokwadi evose vanopokana.
Ivo havagone kumira vachiona iyi firimu pamwe chete, ivo vachaseka zvinonzwika!
Warren Faira: Iyo Inobata
Iyo inokurudzirwa nenyaya yechokwadi nezve purazi uko zviitiko zvinoitika zvepanormal zvinotanga kuitika. Yakaburitswa mumitambo muna 2013 uye yakaratidza iyo iKutanga kweakateedzana emafirimu akaumbwa nezvikamu zvakati wandei zvichibva pakuferefetwa kweanozivikanwa muongorori akajairika: maWarrens.
Mhuri inofamba ichienda kupurazi rakanaka uko zvinhu zvisinganzwisisike zvinokurumidza kuitika zvinovavhundutsa: mweya mumadhiropu, mamaki asingatsanangurike pamuviri, kunongedza hasha nechimwe chinhu kunhengo yemhuri, nezvimwe. Mushure mechinguva, amai vanotaurirana nevarume veWarren, vanova vanachiremba vezvepfungwa vanoongorora zviitiko zvisina kujairika.
Pakarepo maWarrens vanoona huwandu hukuru hwekusanzwisisika uye kuferefeta kwavo kunoratidza nyaya yemukadzi akapomerwa huroyi uye aigara papurazi. Akapa mwanakomana wake sechibayiro kuna dhiabhori kuti azviuraye. N'anga iri kutaurwa yakatora mutumbi wemitezo yemhuri yakakanganiswa uye maWarrens vakasarudza kudzidzira kudzinga mweya yakaipa.
Zvakateedzana zvezvinhu "zvinokatyamadzwa" zvinoonekwa zviri chikamu chakakosha chemamwe mafirimu ari chikamu chefranchise. Iyi tepi inonyatso kukuchengeta iwe pane kugara uchifungidzira. Iwe haugone kumira kutarisa izvi kana mamwe mafirimu mune iyo franchise!
Mamwe mazita ari musaga yakazara anotevera: Anabelle (2014), Warren Faira: Iyo Enfield Nyaya (2016), Annabelle: The Creation (2017) uye The Nun (2018). Pamusoro pezvo, mafirimu matsva akaziviswa e2019.
Nyeredzi Justin Timberlake naMila Kunis. Iyo rangano inotiudza nezve hupenyu hwaJamie, wepamusoro weNew York scout tarenda uye weLos Angeles-based art director anonzi Dylan, uyo anopiwa mukana wekushandira magazini hombe yeNew York. Jamie ndiye anotungamira kunyengetedza Dylan kuti atore basa iri uye anozvipira kumutora kuti aone guta reManhattan.
Ivo vanobva vatoita kubatana uye vova shamwari. Ivo vanotaura nezve nyaya dzepedyo uye vese vanobvumirana kuti bonde harifanirwe kusanganisira manzwiro kana kuzvipira, saka kukwezva kunodyiwa uye vanofunga zvekuita bonde uye kutanga mhando yehukama pasina kuzvipira uko kwavanenge vakasununguka kutaura nezve zvese zvisiri izvo uye zvishuwo pane bonde ndege.
Mushure mekusangana kushoma, Jamie anoona kuti izvi hazvisi izvo zvaari kutsvaga uye afunga kumisa simba uye kudzokera pakuva shamwari "dzakajairika". Anosangana nemumwe murume waanotanga kufambidzana naye muchidimbu sezvaanorambana naye kutanga. Pakarepo shamwari yake Dylan inomukoka kumutambo wemhuri kunze kweguta kunomukanganisa, asi rwendo irworwo rwunoguma nekungopfuura rwendo rwevhiki ...
Ndicho Chigadzirwa cheSpanish chakatanga muna 2017 uye chinotaurira nyaya yaLaura nherera yakarerwa ichiri mudiki. Makore akati gare gare, anofunga kudzokera kumusha wenherera kwaakagara achiri mudiki aine murume wake nemwanakomana, uyo anotorwawo asi asina ruzivo nazvo. Laura anoronga kuvhurazve imba yenherera semusha unotsigira vana vakaremara. Mumwe mushandi wezvemagariro evanhu anonzi Benigna anotsanangura kuti Simón, mwanakomana waLaura, ane hutachiona hweHIV.
Zvichakadaro Simón anoudza vabereki vake kuti ane shamwari nyowani inonzi Tomás uyo anogara akapfeka maski masaga.
Munguva yekuvhura pati yezvivakwa zvitsva Simón naLaura vanokurukura; kuti mwana anotiza ndokuhwanda kuna mai vake. Laura achiri kumutsvaga, anomhanyira mune mukomana ane maski masaga anomusundidzira nekumuvharira mukati mekugezera. Paanoenda, anowana kuti mwanakomana wake anyangarika uye haakwanise kumuwana. Mwedzi mitanhatu gare gare, mukomana achiri kushayikwa uye Laura anosangana naBenigna zvakare, uyo anotambura nenjodzi inouraya iyo inozivisa chokwadi nezve hupenyu hwake: aive nemwanakomana anonzi Tomás uye akashanda mumusha wenherera uyo waLaura ava nawo.
Laura anotsvaga rubatsiro kune svikiro kutsvaga Simon uye anomuudza nezvedambudziko guru rakaitika munzvimbo iyoyo makore apfuura. Iye pakupedzisira anowana nzira yekutsvaga mwanakomana wake zvakare uye anoziva chokwadi chinotyisa chezvaitika kuna Simon.
Kudanana komedhi nyeredzi Ashton Kutcher naNatalie Portman. Shamwari mbiri dzehucheche dzinosangana zvakare uye dzinopedzisira dzave husiku hunopisa hwepabonde. Zuva rinotevera vanoona izvo Ivo havafanirwe kuve nehukama uye izvo hazvisi izvo zvavari kutsvaga izvozvi, saka ivo vanosarudza kuenderera seshamwari uye pasina kukuru kuzvipira.
Ivo vanoenda kunodya kwekunyepedzera zuva nababa vaAdam vanomukadzi (Ashton Kutcher) uyo ari kufambidzana nemusikana-wekare wake uye chinyararire uye chisina kugadzikana kudya kwemanheru kunoitika.
Vanoenderera mberi nesimba kusvika Adam aona kuti ari kudanana naEmma (Natalie Portman) uye afunga kumukunda, zvisinei izvo zvese zvaanozadzisa ndezvekusundidzira iye kuenda kure. Emma anovanda kuseri kwebasa rake kuchipatara kudzamara vaona kuti kudanana kwavo hakurambike.
Insidious (Husiku hweDhimoni)
Chikamu chekutanga chesaga chakaburitswa mu2011 uye zano rakanangana nemhuri ine mwanakomana anowira mukoma uye akapindirwa nemweya wakaipa. Ivo baba naamai ndiJosh naRenai zvichiteerana. Mhuri inotanga kusangana nezviitiko zvinotyisa uye zvisingatsanangurike. Lorraine, amai vaJosh, vanouya kuzobatsira shamwari yake Elise Reiner: mukadzi ane zvipo zvakakosha akazvipira kubatsira vanhu vari mune dzakapererwa nemamiriro. Ane kugona kutaura nevanhu, mweya, uye madhimoni kubva kumusoro.
Elise paanoshanyira mukomana mudiki ari kutaurwa, anotsanangurira vabereki kuti mwanakomana wavo haazi pakoma. Asi ine iyo kugona kuratidzira kweastral panguva yekurara uye wakatsauka kure kure nemuviri wako, ndosaka yakarasika uye isingakwanise kudzoka kwairi.
Lorraine anoratidza kuti mwanakomana wake Josh, baba vemhuri, zvakare vane kugona kumwechete saka ivo vanoita sarudzo yekuti Josh anoenda kunotsvaga mwanakomana wake kuburikidza nerumwe rwenzendo idzi. Mune imwe nyika inowanisa, anowana mwanakomana wake uye anoona kuti vese vari kuvhimwa nedhimoni kwavanokwanisa kutizira kwariri.
Josh nemwanakomana wake vakachengeteka! Nekudaro, Elise anowana chokwadi chinotyisa chinomutorera hupenyu hwake.
Saga parizvino rinosanganisira mana mafirimu uko Elise Reiner anotiperekedza parwendo runotyisa uye takatarisana nemadhimoni ane hutsinye. Mazita eakateedzana ari Insidious Chitsauko 2, Chitsauko 3 uye Iyo Yekupedzisira Kiyi.
Shanda uchienderera mberi… Mafirimu ekuona sevanhu vaviri!
Hapasisina zvikonzero! Pachave pasina chikonzero chekurara ... Sarudzo inounzwa nemafirimu ekuona sevaroorani, iyo inosanganisira matatu emadhivhi erudo uye matatu anotyisa mafirimu, anotipa iyo yakanaka sarudzo yekuzvivaraidza isu. Ingosarudza: Kutya kana kudanana?
Gadzira popcorn uye chinwiwa chinozorodza! Nakidzwa nemafirimu esarudzo yako mumasikati kana muvhiki marathon.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndipei zororo » Cine » Mafirimu ekuona sevanhu vaviri
Yakanakisa TV akateedzana ema90
Yakanakisa TV nhepfenyuro ya2018